HDMI vs DisplayPort vs DVI vs VGA vs USB-C: Hukama hwese hwakatsanangurwa pamwe nemawaniro anoita 144Hz
February 11, 2021 Dai 4, 2022 0
Isu tinotsanangura musiyano uripo pakati pechiratidziro chega chega chekuratidzira chiripo uye tinokubatsira iwe kusarudza izvo zvakakunakira iwe
Vazhinji monitors vanozove nemhando dzakasiyana dzekushandisa dzinowanikwa, uye PC yako kana laptop ichashandisawo zvakabuda zvakasiyana, saka zvinogona kunetsa kusarudza kuti ndechipi chakanakisa kubatana kushandisa.
Pasi pemamiriro mazhinji, unogona kuenda nekushandisa chero tambo yawakarara - uye chero chinoshanda - asi kana iwe uine zvimwe zvinodiwa, sekutakura odhiyo, kuratidza resolution yepamusoro kana kuburitsa yakakwira zororo zororo yekutamba, ucha unofanirwa kuve unonzwisisa zvakanyanya nesarudzo yako tambo.
Isu tinoratidzira dzakasiyana mhando dzekubatana pazasi uye nekukupa dzakasiyana mashandisiro mamiriro ekukubatsira iwe kusarudza. Tichataridzawo kubatana kwakanakisa uye tambo yekusarudza ye144Hz uye zvimwe zvepamusoro zororo ratidziro.
Iyi 2m 4K HDMI tambo ikozvino hafu yemutengo
Mushure mekuremara HDMI tambo kutakura 4K zvirimo? Iyi tambo ye2m kubva kuAmazon inofanirwa kuita hunyengeri, uye ikozvino unogona kuitora iyo 55% pasi - pasi kubva pa £ 20 kusvika pa £ 10 chete. Amazon yaive £ 20Zvino £ 10Tenga izvozvi
Heino pfupiso yekukurumidza yemhando dzekubatanidza:
HDMI: Audio uye vhidhiyo chiratidzo, zvakanakira TV kune PC kubatana
DVI: Vhidhiyo chete, yakakwana kune masisitimu ekare kana ye144Hz pa1080p
RatidzaPort (DP): Iyo yakanakisa yekubatanidza yeodhiyo uye vhidhiyo chiratidzo, uye inogona kuendesa 144Hz kusvika ku4K
VGA: Yakare, inhaka vhidhiyo yekubatanidza. Ingoshandiswa chete kana pasina chimwe chinhu chiripo
USB Type-C: Newest odhiyo, vhidhiyo, data uye simba chinongedzo. Yakanakisa kubatana kwemalaptop uye nhare mbozha
HDMI: Iyo yakanakisa TV kune PC kubatana
HDMI, kana "High-Definition Multimedia Interface" kushandisa zita rayo rizere, ndiyo imwe yeanowanzozivikanwa mavhidhiyo ekubatanidza. Iwe ungangozvionera pane yako terevhizheni, set-yepamusoro mabhokisi, mahwendefa, malaptop nemitambo yemitambo.
Amazon Basics Yakakwira-Yekumhanya, Ultra HD HDMI 2.0 Cable, Inotsigira 3D Mafomati uye neAudio Return Channel, 0.9 m
£ 4.99 Tenga izvozvi
AmazonBasics Yakakwira-Yekumhanya HDMI Cable, 3 Tsoka, 1-Pack
$7.74 Tenga izvozvi
4K HDMI tambo 2m, HDMI 2.0 Cable Snowkids flat Ultra hdmi kune hdmi yakakwira kumhanya 18Gbps [email inodzivirirwa], UHD 2160p, HD 1080p, 3D, ARC, Ethernet, Kudzoka kweVhidhiyo, HDCP 2.2, inoenderana nemoto TV / PS4 mhando nylon tambo grey.
£ 9.99 Tenga izvozvi
HDMI yakasarudzika pakati pesarudzo dzakawanda dzekubatanidza nekuti inokwanisa kutakura ese ari maviri uncompressed vhidhiyo uye isina kumanikidzwa odhiyo. Ichi ndicho chikonzero chave chiri chinongedzo chesarudzo yemazhinji multimedia zvishandiso sezvo iri imwechete-tambo mhinduro.
Mamwe mabhenefiti eHDMI anosanganisira mabasa akadai seHDMI-CEC (HDMI Consumer Electronics Control), iyo inobvumidza iwe kudzora akawanda madhijitari neiri kure kure. Semuenzaniso, batanidza bharuti kune yako terevhizheni kuburikidza neHDMI-CEC chiteshi chinowirirana uye iro gudzanzwi rinogona kubatidza nekudzima neterevhizheni yako uye rinodzorwa nerekure kure.
HDMI yaona kudzokororwa kwakawanda kubvira payakatanga muna 2002. Iyo vhezheni yadzo yakajairika, inoshandiswa mumidziyo mizhinji yevatengi parizvino, ndeye 1.4 asi pane nyowani, inonakidza inotsanangurwa ye2.0 ikozvino yave kuwedzera kuve yakanyanya. Musiyano mukuru pakati peiyo 1.4 uye 2.0 maratidziro anotarisisa kutenderera bandwidth inowanikwa HDMI 1.4 ine bandwidth yakakwira ye10.2 Gbps / s nepo iyo HDMI 2.0 ichikwira kunze pa18 Gbps / s.
Icho chikonzero chekuti bandwidth inova yakakosha kunokonzerwa nekuuya kwe4K zvemukati. Nekuda kweiyo yakatemwa bandwidth yeHDMI 1.4, chete 24fps yaikwanisika pakuita 4K resolution (3,840 x 2,160). Zvino, nekuda kweiyo yekuwedzera bandwidth inowanikwa mune iyo 2.0 spec, inosvika ku60fps pa 4K resolution inogoneka. Izvi zvakare zvinokutendera iwe kuti uone 144Hz pa1080p (1,920 x 1,080) kuburikidza ne HDMI 2.0 kubatana.
Ruvara kudzika iri zvakare imwe nzvimbo uko iyo nyowani HDMI 2 kududzirwa kunowana zvimwe zvakanaka. Iko 1.4 yaive yakaganhurirwa ku8-bit ruvara, HDMI 2 ine 10-bit kana 12-bit inowanikwa. Izvi zvakakosha kuti kana High Dynamic Range (HDR) zvemukati zvanyanya kuwanika.
HDR inogona kurondedzerwa seyero pakati penzvimbo dzakareruka uye dzakasviba dzemufananidzo. Kazhinji, neyakajairika simba renji, iwe uri kurasikirwa nehunyanzvi chero mugumo wechiedza chakatarisana. Vhenekera chiitiko chemumvuri ruzivo uye iwe unozoguma nekuburitswa-kunze kwakakwirira kana kufumura kune akajeka uye iwe unorasikirwa nemumvuri ruzivo. HDR inobvumidza yakakura huwandu hweruzivo pane yakazara yakazara spectrum.
Iwe pamwe watouya neHDR kuburikidza nekutora mifananidzo. Mazhinji mafoni emafoni iye zvino ave neiyo HDR modhi uko ivo vanonyanya kutora mifananidzo yakawanda pakuonekwa kwakasiyana uye vachiasanganisa. Sezvo HDR yave chikamu cheiyo Ultra HD standard, unogona kutarisira zvimwe Ultra HD Blu-ray zvemukati kutora mukana. Izvo zvinoda zveAmazon uye Netflix inoyerera HDR zvemukati, chishandiso.
Kazhinji kazhinji kwete, kana iwe uchibatanidza chimwe chinhu kuterevhizheni, HDMI ichave yakanakisa, uye pamwe chete, kubheja. Mazhinji maPC monitors anosanganisirawo iyo HDMI yekuisa. Nhau dzakanaka, panosvika 1.4 kusvika 2, ndedzekuti haufanire kumhanyira kunze uye utenge tambo nyowani. Kuti utore mukana weiyo 2.0 spec iwe unongoda zvese zvishandiso pamagumo ega etambo kuti ive 2-inoenderana. Chero HDMI tambo ichaita, uye isu tatoona kuti pane hapana mutsauko muHDMI tambo yemhando.
Chinhu chekutarisa kune akasiyana akasiyana HDMI kubatana kwemasayizi. Kwete chete kune yakazara-saizi HDMI (Rudzi A), asi unogona kusangana ne mini-HDMI (Type B) uye micro-HDMI (Type C), futi. Izvi zvinowanzo kuwanikwa pazvinhu zvinotakurika zvakaita semapiritsi, makamera uye makamera ekuita, panodiwa kubatana kwavo kudiki. Iwe unogona kana kutenga HDMI-mini-HDMI / HDMI-Micro-HDMI tambo kana iwe unogona kutenga mini / Micro-HDMI adapta kuti ugone kushandisa yakazara-saizi HDMI tambo.
Kwete zvine chekuita neiyo HDMI tambo pachayo asi, pachinzvimbo, iyo HDMI yekubatanidza pane yako kifaa kana TV chinhu chinonzi HDCP kana "High-Bandwidth Dhijitari Dziviriro" kushandisa zita rayo rizere. Iyo yazvino vhezheni yeHDCC iHDCP 2.2, izvo zvinodikanwa kune zvemukati zve4K. HDCP inonyanya kukumisa kuti usakwanise kubatanidza mudziyo wekutamba, senge Blu-ray mutambi, kune mudziyo wekurekodha kuti uite makopi. Rudzi urwu rwekuchengetedza kopi ranga riripo kwemakumi emakore.
Iwe ungangoona kuti yako nyowani Ultra HD / 4K TV inotsigira HDCP 2.2 pachiteshi chayo cheHDMI, asi haisi nguva dzose kune vese. Mimwe mienzaniso inongotsigira HDCP 2.2 yeHDMI 1 uye HDMI 2 zvinopinda, saka kana uri kubatanidza inopenya nyowani Ultra HD Blu-ray mutambi, senge Panasonic DMP-UB900 kana Samsung UBD-K8500, ita chokwadi chekushandisa chaiyo HDMI yekuisa.
RatidzaPort: 4K pa144Hz ine odhiyo uye vhidhiyo kugona
Kusvikira HDMI 2.0 yave yakajairwa, DisplayPort yainge yarova kana zvasvika pamatanho akakwirira. DisplayPort 1.2 yakagara ichikwanisa kutakura 3,840 x 2,160-resolution vhidhiyo pa60fps (kana mwero wekuzorodza we60Hz) uye ndiyo yakajairika DisplayPort kududzirwa pane vakawanda vatengi monitors uye zvishandiso izvozvi. Izvi zvine 17.28Gbits / sec yebandwidth.
Iyo nyowani 1.3 uye 1.4 vhezheni, kuti ese ari maviri ane huwandu hwehuwandu hwehuwandu hwe25.92 Gbits / sec, ese ari maviri ari kuwanikwa zvakanyanya kuwanikwa. Iine yakawedzera bandwidth kugona, iyo inovhura iwo mafashama kumasuo akakwirira masarudzo senge 7,680 x 4,320 (8K).
DisplayPort 1-1.1a inokwanisa kuburitsa 144Hz pa1080p, nepo 1.2-1.2a inogona kuburitsa 1440p pa144Hz, 1.3 inobuda inosvika ku120Hz pa4K, uye 1.4 inogona kuburitsa 144Hz pa4K ichishandisa Ratidza Stream Compression (DSC).
Mukana mukuru weDisplayPort ndiko kugona kuburitsa kune akawanda maratidziro kuburikidza neMulti-Stream Yekutakura (MST). Iwe unogona kuita izvi neku daisy-kusunga inoenderana monitors pamusoro peDisplayPort kana nekubatanidza DisplayPort MST splitter kune yako imwechete DisplayPort kuburitsa paPC yako kana palaptop. Iwe unofanirwa kushanda mukati meiyo bandwidth kukwana kwechero ipi DisplayPort tsananguro yauri kushandisa, senge maviri 1,920 x 1,080 monitors pamusoro pe1.2 kana maviri 3,840 x 2,160 ekuratidzira pamusoro peiyo DisplayPort 1.3+ kududzirwa. Saka nekudaro, DisplayPort inowanzo kuve sarudzo hombe kune avo vari kutsvaga kushandisa akawanda monitori
DP kune DP Cable, TechRise 2-Meter Goridhe Yakapetwa RatidzaPort kuDisplayPort (DP V1.2) Audio neVhidhiyo Cable 4K 60Hz Kugadziriswa Kunotsigirwa - Murume kusvika Murume
£ 7.99 Tenga izvozvi
Nyaya dzeCable RatidzaPort kuDisplayPort Cable (DP kune DP Cable) 6 Tsoka - 4K Kugadziriswa Kwakagadzirira
$8.99 Tenga izvozvi
DisplayPort zvakare ine zvazvakanakira kana zvasvika kune screen-Refresh mitengo kuburikidza ne AMD Adaptive-Sync / FreeSync uye Nvidia G-Sync. Izvi ndizvo makambani ese ari maviri akasarudza kushandisa yavo yekumisikidza giraidhi. Chaizvoizvo izvi zvinobatsira kudzora kubvarura skrini, izvo zvinonyanya kufarira vatambi. Panguva yekuvandudza chinyorwa ichi, ndiyo chete nzira yaunogona kumhanyisa Nvidia G-sync pane iyo AMD FreeSync yekutarisa. Verenga zvakawanda nezvazvo, pano.
DVI: 144hz pa1080p
DVI inomiririra "Dhijitari Inoonekwa Yekuona", uye ndeimwezve kubatana kunowanikwa paPC monitors. Zvinhu zvinogona kuve zvinokanganisa zvishoma kana iwe uchifunga kuti kune matatu matatu akasiyana eDVI. Kune DVI-A (chiratidzo cheanalogog), DVI-D (dijitari chiratidzo) uye DVI-I (inosanganisirwa analogog uye chiratidzo che digital. Kwete izvozvo chete, asi DVI-D uye DVI-ini ndine imwechete-yekubatanidza uye mbiri-yekubatanidza shanduro. Mazuva ano, DVI-A haina kujairika, nekuti haina nani kupfuura VGA.
Musiyano uripo pakati peimwe-chinongedzo uye mbiri-chinongedzo inoreva kune yakawanda sei bandwidth iyo tambo inogona kutakura. Imwe-yekubatanidza DVI-D kana DVI-I tambo inogona kutakura 3.96 Gbit / s, iyo inokwira kumusoro pa 1,920 x 1,200 resolution. Dual-link, kune rimwe divi, panyama ine mapini ekuwedzera pazvibatanidza, ichibvumidza huwandu hwakawanda hwe 7.92 Gbit / s uye 2,560 x 1,600 resolution. Kunyangwe DVI ichiri kubatana kwakabatana, iri kuve yemusi, saka kana iwe uchida kuburitsa yakanyanya resolution unozofanira kushandisa HDMI kana DisplayPort pachinzvimbo.
Padivi rekuwedzera, DVI-D inogona kuburitsa 144Hz yekuvandudza mwero pa1080p.
Amazon Basics DVI kusvika DVI Cable (4.6 m / 15 tsoka)
£ 11.75 Tenga izvozvi
Amazon Basics DVI kusvika DVI Cable - 9.8 Tsoka (3 Mamita)
VGA (D-SUB): Nhaka tambo yekubatanidza
VGA ndiyo yechinyakare yekubatana kwakatsanangurwa muchinyorwa chino. Izvo zvave zviripo kwemakumi emakore, kufambidzana kusvika kumazuva eakakora, anorema CRT monitors ezuro. VGA inomirira Vhidhiyo Graphics Array asi inogona zvakare kutumidzwa se "RGB kubatana" kana "D-sub". Nepo VGA ichikwanisa kuburitsa kusvika 1,920 x 1,080, dambudziko nderekuti kubatana kweanalog, saka paunenge uchisundira chisarudzo kumusoro unowana kudzikisira kwemufananidzo sezvo chiratidzo chinoshandurwa kubva kuanalogog kuenda kudigital. Kunze kwekunge iwe uchinyatso fanirwa, shandisa imwe yehumwe kubatana pane VGA.
Rankie VGA kuVGA Cable, 1.8 m
£ 6.99 Tenga izvozvi
USB-C: Yakanakisa laptop kubatanidza
Nokuburitswa kwe2016 MacBook, Apple yakasundira chikepe kunze uye yakatsiva ese ehukombori hwayo nelaptop ne USB Type-C chinongedzo. USB Type-C yanga ichigadzira kutaridzika kukuru mukati mevatariri, senge iyo Philips Brilliance 258B6QUEB yatakatarisa, ine USB Type-C yekupinda, ichiita iyo yakanaka shamwari ye2016 MacBook.
Chii chaizvo chinoita kuti chinongedzo cheUSC Type-C chizivikanwe iplagi inodzoserwa zvizere, inoenderana nepuratifomu (ine mafoni matsva, piritsi, malaptop uye makomputa), uye kugona kwayo kwete chete kuburitsa vhidhiyo, asi zvakare kutumira odhiyo, data uye simba . Izvi zvinoita kuti ive yevhidhiyo tambo yakanyanyisa, uye isu tinotarisira kuona zvimwe zvakawanda tichiishandisa mumakore anotevera.
USB C kune USB C Yekukurumidza Yekuchaja Cable, [2 Pack 2M / 6.6FT] AviBrex 60W 20V / 3A USB C PD / QC Yekukurumidza Charge Cable Nylon Yakarukwa yeSamsung Galaxy Note 10 Plus, Google Pixel 2/3 / 3a / 4 XL, iPad pro 2018, MacBook
USB C kuna USB C 60W Cable, JSAUX [2-Pack 6.6ft] Type C Charger Cord Inoenderana ne Samsung Galaxy S21 / S21 + / S20 + Ultra, Cherekedza 20/10 Ultra, MacBook Air / Pro, iPad Pro 2020/2018, iPad Mhepo 2020, Pixel-Grey
$8.49 Tenga izvozvi
Maitiro ekubatanidza HDMI, DisplayPort, DVI, USB-C uye VGA
Mazhinji mamaboards uye makadhi emifananidzo akazvipira anozove nezvakawanda zvinobuda. Iwe unogona kushandisa musanganiswa weizvi kuburitsa kune akawanda monitors. Saka kana uine HDMI uye DVI zvabuda, batanidza imwe yekutarisa uchishandisa HDMI uye imwe yacho uchishandisa DVI. Sezvambotaurwa pamusoro apa, kana iwe uri kushandisa DisplayPort uye rako giraidhi kadhi kana chishandiso inotsigira Multi-Stream Kutakura, unogona daisy-cheni DisplayPort uye USB-C monitors, futi.
Kana iwe uchida kusanganisa iyo giraidhi mhedzisiro yeako mamaboard uye yako yakatsaurwa giraidhi kadhi, izvi zvinogona kuve zvinogoneka nevamwe Intel ma processor. Izvi zvinoshandisa "hybrid multi-monitor" maitiro asi ichave inoenderana nechipset uye pamwe iro mamaboard rinoshandiswa. Iwe unogona zvakare kuda kukwidziridza iyo BIOS kuti iite kuti ishande. Intel inonyora anotevera machipisi seanowirirana mune iyi yemahara modhi: Hybrid yakawanda-yekutarisa rutsigiro inotsigirwa zviri pamutemo neIntel Embedded Graphics Drivers kune masisitimu anoshandisa Intel Q45 / G41 / G45 uye GM45 / GL40 / GS45 chipsets, kana gare gare.
Ungawana sei 144Hz: Ndeipi tambo inodiwa kune 144Hz?
Sarudza DisplayPort ye144Hz kusvika 4K - inotsigira odhiyo uye vhidhiyo
Sarudza DVI kana DisplayPort isipo - inotsigira vhidhiyo chete
Sarudza HDMI 2 kana DisplayPort isipo kana iwe uchida odhiyo pamusoro pe144Hz (sezvo DVI isingatsigire odhiyo)
Kune avo vedu vanoita mutambo, iwe unogona kunge uchinetseka kuti ndeipi yakanakisa tambo yekushandisa kuti uwane iyo 144hz yekuvandudza mwero. Kune tambo dzakasiyana siyana dzaunogona kushandisa, asi iwe unofanirwa kunyatsoteerera kune iyo vhezheni yekuburitsa chiteshi chako neyeye yako yekutarisa.
Kuti uwane 144Hz, iwe unofanirwa kushandisa DisplayPort sezvo iri iyo inokwanisa kwazvo kubva muboka. Pano, DisplayPort 1.0-1.1a inokwanisa kuburitsa 144Hz pa1080p, nepo 1.2-1.2a inogona kuburitsa 1440p pa144Hz, 1.3 inoburitsa inosvika ku120Hz pa4K, uye 1.4 inogona kuburitsa 144Hz pa4K ichishandisa Ratidza Stream Compression (DSC). Ndiyo yekubatana kwakanyanya kuratidza 144Hz.
Zvisinei, mamwe makadhi ekare emifananidzo uye vatariri vekare havana DisplayPort kuburitsa kana kuisa, asi pachinzvimbo, vane DVI uye HDMI. Nekutenda, idzi dzinotsigira 144Hz, asi iwe uchafanirwa kungwarira neshanduro uye resolution yaunoda kuburitsa.
Kana iwe uchida kuwana 144Hz pa1080p kunze kweHDMI chiteshi, iwe unofanirwa kuona kuti iwe unokwanisa kuwana kune HDMI 2.0 chiteshi pane ese ari maviri maoneti ako uye giraidhi kadhi. Kana kadhi rako remifananidzo kana monitari yakare, pane mukana, urikushandisa vhezheni 1.4 kana pazasi, kwaunowana yakanyanya kuzorodza chiyero che120Hz pa 1080p. Apa ndipo panouya DVI, sezvo iri kukwanisa kuwana 144Hz pa1080p.
Kunyangwe uine hukama hupi hwaunosarudza, iwe uchazoda kuve nechokwadi chekuti iwe unopinda mune ako marongero ekugadzirisa (OSD) kumisikidza iyo DP vhezheni ku1.2 (kana yakakwira) kana HDMI 2.0 (kana yakakwira), uye wozopedzisira watarisa ako eGPU marongedzero akagadziriswa iyo inokurumidza zororo zinga.
Maitiro ekubatanidza ekunze monitor kune yako Mac
Yakanakisa kuongorora 2021: Iyo yakanakisa 1080p, 1440p, 4K uye ultrawide monitors yekutenga
PS4 Pro Mitambo Rondedzero: Chinyorwa chega Chega Chinowedzeredzwa Na PlayStation 4 Pro, 4K, HDR, Yakagadziridzwa Framerates
Aya ndiwo Akanakisa Tambo dze USB: Type-A kune Type-C uye Type-C kune Type-C
Yakanakisa yemitambo yekutarisa 2020: Iyo yakanakisa 1080p, 1440p, 4K uye Ultrawide monita yePS4, Xbox One uye PC
Yakanakisa bhajeti yemitambo yekutarisa 2020: Iyo yakachipa yakachipa 1080p, 1440p kana 4K monitors ePC yako kana koni
Yakanakisa webcam 2021: Iwo akanakisa maccam eZoom, Matimu uye Google Sangana vhidhiyo mafoni kubva kumba
Yakanakisa bhajeti yekutarisa: Iwo akanakisa 1080p uye 1440p monitors ekutenga
60Hz vs 144Hz vs 240Hz Vatariri - Kana Iyo Inoita Kuti Uvandudze